News – Page 2 – Ministry of Education in Puntland
Kormeerkii Waxbarashada Magalada Boosaaso,2020.
Kormeerkii Waxbarashada Degmada Boosaaso oo si habsami leh uga socda oo la kormeeray Goobaha Waxbarashada Magaalada Boosaaso. Kormeerka Waxbrashada degmada Boosaaso ayaa saaka aroortii teamamkii shaqooyinku waxa ay kala aadeen […]
Saacado kooban oo qiimahoodu aad u sarreeyey, qof daawaday mooyee aanan qof kaleba loo sifeyn kareyn, ayaa ka dhacay qayb ka mid ah gudaha Kulliyadda Tababbarka Macallimiinta ee GTEC ee […]
Guddiga Arimaha Bulshada ee Baarlammaanka Puntland oo la kulmay Masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada Puntland.
Kulankan ay guddiga horumarinta ee arrimaha bulshada ee baarlammaanka Puntland kula kulmeen kusimaha Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare, ahna Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare iyo Agaasimaha Guud ee […]
Dugsiga sare ee Gambool ee Degmada Garowe.
Dugsiga sare ee Gambool ee degmada Garowe ee gobolka Nugaal ayaan xaaladdiisu saakay degganayd, kadib markii shalay mudaharaad culus oo rabshado wata ay sameeyeen ardayda wax kabarata dugsiga sare Gambool. […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare (WWTS) ee Puntland ayaa imtixaan ka qaadday arday deeq waxbarasho oo heerka labaad ee jaamacadda ah loogu dirayo dalka Ethiopia.
Tobanka Kaalmood ee u sareeya Imtixaanka Puntland 2020.
Ogeysiis, Ogeysiis. Ujeeddo: shaacinta imtixaanaadka dugsiyada sare ee dawladda Puntland 2019-2020.
Waxbarasho lagu sidkay tiknooloji ayaan dhiggeenna caalamka kula tartami karnaa”
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa bilowday sixitaanka imtixaanaadka fasallada 12aad ee dugsiyada sare ee Puntland 2019-2020
Ministry of Education and Higher Education (Covid-19 Response)